नेपालमा एकैदिन ३ हजार १६७ जनामा कोरोना संक्रमण, १८०० निको भए Canada Nepal
के पाकिस्तानको संसद्‌मा 'मोदी मोदी' भनेर साँच्चै नारा लागेको थियो ?
नेपालमा एकैदिन ३ हजार १६७ जनामा कोरोना संक्रमण, १८०० निको भए
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार १६७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ ।
शनिबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले १५,४३८ पिसिआर गरिएकोमा ३ हजार १६७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए ।
नेपालमा आजसम्म ३८ हजार ७३७ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १ लाख २९ हजार ३०४ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा थप १८०० जनाले कोरोनालाई जितेका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या ८९ हजार ८४० जना पुगेको छ ।
यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा १२ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ सय २७ पुगेको छ ।
कार्तिक १, २०७७ शनिवार १६:३७:३८ बजे : प्रकाशित
तस्बिर: बीबीसी नेपाली सेवा
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले चढ्ने एभ्रो जहाज हालसालै नेपाली सेनाले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसमा राजा वीरेन्द्रलाई कैयौँ पटक उडाउने पाइलट तेजेन्द्रजङ्ग थापा हुन्। थापा भन्छन्, “फ्लाइट सकेपछि मेरै नाम लिएर सिगार वा चकलेट बक्सिन्थ्यो।“ बेलायतमा पढेका पूर्व सहायक रथी थापा नेपाली सेनाका प्रथम पाइलट समेत हुन्।
४६ सिटको यो जहाज बेलायत सरकारले ४० वर्षअघि नेपाललाई उपहार दिएको थियो। त्यसमा राजा र उनका पाहुनाहरूलाई उडाइन्थ्यो। थापासँग कुराकानी गरेर बीबीसीले बनाएको यो भिडिओ हेर्नुहोस्।
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार १४:१२:२१ बजे : प्रकाशित
# राजा वीरेन्द्र
# तेजेन्द्रजङ्ग थापा
काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ फर्मड पुलिस युनिट (एफपियु) को रुपमा डार्फर, सुडानस्थित युनामिड मिसन १७औं समूहमा खटि जाने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच बिदाइ गरेका छन् ।
बिदाइ समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले उक्त समूहका कन्टिनजेन्ट कमाण्डर प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीलाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गरे।
श्रोत: नेपाल प्रहरी
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार १३:४९:५५ बजे : प्रकाशित
# मिसन जाने
# प्रहरी टोलीलाई बिदाइ
भक्तपुरमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्यो
काठमाडौं । भक्तपुरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र मृत्यु दर दैनिक बढ्दै गइरहेको छ । जिल्लामा शुक्रबार बिहानसम्ममा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार पाँच सय नाघेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका अनुसार जिल्लामा तीन हजार १७५ पुरुष र दुई हजार ४२१ महिला गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार ५९६ जना पुगेको छ ।
त्यसैगरी जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६९ पुगेको छ । बुधबार र बिहीबार मात्रै भक्तपुरमा भाइरसकै कारण पाँचजनाको ज्यान गएको छ । भक्तपुरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुने दर समग्र नेपालको दोब्बर भन्दा बढी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजारले जानकारी दिए ।
कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालको समग्र मृत्युदर ०.६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा भक्तपुरमा भने बिहीबारसम्म सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने दर १।२३ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको निको हुने दर भने भक्तपुरमा ६७.३३ प्रतिशत छ । बिहीबारसम्म दुई हजार ८१ पुरुष र एक हजार ६१८ महिला गरी तीन हजार ६९९ सङ्क्रमित निको भएर घर गएको कार्यालय प्रमुख मिजारले जानकारी दिए ।
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार १२:५४:५३ बजे : प्रकाशित
# मृत्यु दर
समृद्धि र धन प्राप्तिको महत्व बोकेको कोजाग्रत पूर्णिमा, यसरी भरपूर उठाउनुहोस् फाइदा
काठमाडौँ।धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजाराधनासहित रात्रिमा जाग्राम बसेपछि आजदेखि बडादसैँ समापन हुँदै छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा आज साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजाराधना गरी रातभर जाग्राम बसेर मनाएसँगै दुर्गा पक्ष सकिन्छ।
शास्त्रअनुसार गर्नुपर्ने सबै बलिपूर्ति अर्थात् अखिल बलिपूर्तिको काम पनि आजै हुनेछ। अखिल बलिपूर्ति भएसँगै विजयादशमीदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा लगाई मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम पनि आजैदेखि समाप्त हुन्छ। आजै जमरालाई नजिकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि तीर्थस्थलमा लगी सेलाइन्छ।
नेपाल तथा भारतका हिन्दु समुदायमा यस पूर्णिमालाई कुमार पूर्णिमा, कोजागिरि पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा वा शरद पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ। मनसुनको अन्त्यसँगै यसबेला खेतबाट अन्न भित्र्याउने चलन छ। हिन्दु मान्यता अनुसार शरद पूर्णिमाको बेला चन्द्रमा आफ्नो सबै १६ कलाहरुसहित प्रकट हुने गर्दछ।
हिन्दू धर्मकाअनुसार प्रत्येक मानवको गुण केहि निश्चित कलासँग सम्बन्धित हुन्छ र सोह्रवटा विभिन्न कलाको समायोजनले एक सिद्ध मानवको सृजना हुने गर्दछ। त्यस्तै भगवान श्रीकृष्ण यी सबै १६ गुण वा कलाका साथ जन्मेका थिए र भगवान विष्णुको पूर्ण अवतार थिए। यसैगरी भगवान श्री रामसँग भने केवल १२ गुण वा कला साथ जन्मेका थिए।
यसदिन चन्द्रमा सबै १६ कलाका साथ आकाशमा चम्कने भएकाले यसको किरणहरुमा विशेष किसिमको शक्ति वा गुण हुने र यस किरणले शरीरलाई सकारात्मक पोषण दिने गर्दछ।
त्यसैगरि यसदिन धनकी देवी लक्ष्मी पनि पृथ्वीमा आउने र मनुष्यको सम्पूर्ण क्रियाकलाप वा गतिविधिलाई नियाल्न पृथ्वीको चारैतिर घुम्ने पुराणहरुमा उल्लेख छ।
साथै भारतको ब्रिज क्षेत्रमा यसदिनलाई रास पूर्णिमापनि भन्ने गरिन्छ किनभने यसदिन भगवान कृष्णले प्रेमको ईश्वरीय नाँच प्रदर्शन गरेका थिए।
यसअर्थमा, यस दिन चन्द्रमा धर्तिको नजिक आउने र चन्द्रमाको प्रकाशमा एउटा विशेष गुण हुने मान्यता छ । यसदिन चन्द्रमाको किरणको प्रत्यक्ष लाभ उठाउन र साथै धनकी देवी लक्ष्मी पृथ्वीमा अवतरण गर्ने हुँदा रातभर जागा रही देवी लक्ष्मीको आराधनामा लागेकामा समृद्धि र धन प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । यसदिन रात भरि जागा रही भजन कीर्तन गर्ने साथै कौडा र अरु विभिन्न किसिमका जुवा खेल्ने गर्छन् ।
धर्मशास्त्रका अनुसार यसदिन अक्षक्रीड़ामा सामेल हुनु लाभादायिक हुने मान्याता छ। तर, यस पवित्र रातको गलत अर्थलगाई आजकाल भने धर्म र संस्कृति ठेस पुर्‍याउने काम भएको र कतिपय ठाउँमा जुवाले भएभरका सबै सम्पत्ति हार्दा परिवारको विचल्ली भएका खबर बर्षाैँनी आउने गरेको छ ।
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार ०९:२०:०१ बजे : प्रकाशित
# समृद्धि र धन प्राप्तिको महत्व
कोरोना संक्रमण भई निको भएका काभ्रे पोस्ट साप्ताहिकका सम्पादक चौलागाईको निधन
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण भई निको भएका काभ्रे पोस्ट साप्ताहिकका सम्पादक विष्णु चौलागाईको निधन भएको छ ।
उनको शुक्रबार बिहान उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
कोरोनालाई जिते पनि कडा निमोनिया र श्वासप्रश्वासका कारण चौलागाईको निधन भएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन् ।
काभ्रेमा पत्रकारिताको विकास गर्न चौलागाईको योगदान धेरै छ ।
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार ०९:१८:०२ बजे : प्रकाशित